केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन, यसको जवाफ जनताले दिनेछन् : प्रमुख, वीरगन्ज महानगर – Health Post Nepal
केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन, यसको जवाफ जनताले दिनेछन् : प्रमुख, वीरगन्ज महानगर
२०७७ वैशाख २८ गते १३:२०
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको छपकैयामा एकै परिवारका १७ जनासहित २४ जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसअघि पनि त्यहाँ मस्जिदमा बसिरहेका ३ जना भारतीयसहित ४ जनालाई संक्रमण भइसकेको थियो।
कोरोनाको जोखिम क्षेत्रको रुपमा लिइँदै गर्दा वीरगञ्जका मेयर विजयकुमार सरावगी कुहिएको चामल राहतमा वितरण गरेकोभन्दै विवादमा तानिए। व्यापारी घरानाका सरावगीले कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचार बाहिरिएपछि उनको गोदाममा सरकारले छापासमेत मारियो।
तर, पछि त्यो विवाद सामसुम भयो। यस्तो अवस्थामा उपमहानगरले कोरोना जोखिम न्युनिकरणका लागि के गरिरहेको छ? केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कस्तो समन्वय गरिरहेको छ? कुहिएको राहत बाँडेको आरोप कसरी लाग्यो? लागयतका विषयमा हेल्थपोस्ट नेपालका लागि मेयर विजयकुमार सरावगीसँग आरोहण शाहले गरेको कुराकानी-
अहिले वीरगञ्ज कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै गएकोप्रति कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ?
हामी यसप्रति निकै चिन्तित छौं। तपाइले भनेजस्तै पछिल्लो समय वीरगञ्ज कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनेको छ। बैशाख १७ गते एउटै परिवारका १७ मा कोरोना देखिएसँगै यो क्षेत्रका जनता चिन्तित बनेका छन्। यी १७ जनासहित यहाँ संक्रमितको संख्या २४ जना पुगिसकेको छ।
जसमध्ये ३ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। भारतसँग सीमाना जोडिएको नेपालकै ठूलो नाका यहाँ छ। सुख्खा बन्दरगाह भन्सार पनि यही छ। नेपालकै प्रमुख मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज हो। त्यसैले कोरोना भित्रिए यहाँ महामारीले ठूलो रुप लिन्छ भन्ने आंकलन हामीले पहिलादेखि नै गरेका थियौं।
तर, सरकारबाट हामीलाई अपेक्षित सहयोग भएको छैन। सरकारले वीरगञ्जलाई वाइपास गरेर अगाडि बढिरहेको छ। हामीले पहिलेदेखि नै वीरगञ्ज इपिसेन्टर हुनसक्ने खतरामा छ भनिरहेका थियौं। तर, खै यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको? राज्य गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्‌यो। तर, त्यो कहिल्यै भएन। बल्लतल्ल पिसिआर मेसिन चालु भएको छ। अहिले वीरगञ्जमा ५ हजारभन्दाको परीक्षण तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। किट अभावले त्यो हुन सकिरहेको छैन।
बिहीबार ९ सय किट आएको छ। तर, त्योे बढी जोखिम रहेका १, २, ३ नम्बर वडाका नागरिकको परीक्षणसमेत गर्न पुग्ने छैन। त्यसैले हामीले एउटा परिवारको एक सदस्यको परीक्षण गर्ने नीतिलाई अगाडि सारेर काम गरिरहेका छौं। एउटा मात्रै कोरोना संक्रमित समाजमा लुकेर बसेको भए त्यसले भयावह रुप लिने भएकाले जसरी भए पनि परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ।
यी त तपाईंका असन्तुष्टिका कुरा भए, आफ्नो क्षेत्रबाट महानगरले के गरिरहेको छ?
पहिलो कुरा हामीलाई सुरुमा जनतालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउनै गाह्रो थियो। त्यसैले सुरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागाउँन संक्रमित क्षेत्रमा गएर मैले आफैबाट परीक्षण सुरु गरे। त्यसपछि सबै जनता परीक्षण गर्न तयार भए। हामीले यस क्षेत्रका जनता समस्यामा परे तुरुन्तै समाधान गरिरहेका छौं। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पर्ने सामग्रीको माग गरिरहेका छौं। चिकित्सकको मनोबल बढाउने काम गरिरहेका छौं। अझ भन्नुपर्दा आफ्नो क्षेमताले भ्याएसम्मको सबै काम गरिरहेका छौं।
नगरपालिकालाई कुहिएको चामल बाँडेको आरोप लागिरहेको छ, यस्तो महाहारीको बेला त्यस्तो किन गर्नुभएको?
वीरगञ्ज– १४ मा वितरण गरिएको चामल कुहिएको भन्दै हल्ला फैलाइए पनि त्यसमा सत्यता छैन। हामीले खान योग्य चामल नै वितरण गरेका हौं। कुहिएको चामल बाँडेको हल्लापछि तीन सदस्यीय छानविन समिति बनेको थियो। समितिले चिसोले गर्दा तीन बोरा चामल ओसिएको पाइएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ। चिसोले गर्दा केही चामल ओसिएकाले भिजेको जस्तो देखिएका थिए।
तर, वडध्यक्ष भरत कुर्मीले हामीविरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाए। उनलाई सचेत गराउने काम भइसकेको छ। केही सञ्चारमाध्यमबाट तथ्यहीन र भ्रामक समाचार आएका छन्। त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। महानगरले १७ बैशाखमा १४ नम्बर वडामा ९ सय ५० किलो चामल बितरण गरेको हो।
तपाईंहरुको गोदाममा समेत केही दिन पहिले प्रशासनले छापा मारेको थियो नि?
मलाई असफल बनाउन केही तत्व सक्रिय छन्। आफ्नै पार्टीका केही नेता मलाई सिध्याउने खेलमा छन्। उनीहरूकै इसारामा केहिदिन पहिले मेरो गोदाममा अवैधानिक तवरले प्रशासनले छापा मारेको हो। तर, मलाई सिध्याउनेहरूको प्रयास विफल भयो। १४ नम्बरका वडा अध्यक्ष भरत कुर्मीलाई उचालेर केही नेता र पत्रकारले विपतीको समयमा फोहरी राजनीति गरेको देख्दा म आफै अचम्ति छु। उनीहरूले यसरी मेरो चरित्र हत्या गरेर के गर्न खोजेका हुन्, मलाई केही थाहा छैन।
महानगरले राहत समाग्री विधि र प्रक्रिया अनुसार नै खरिद गरेको हो। २० हजार बोरा चामल खरिद भएको ठाँउमा तीन बोरा पानीले भिजेर डल्लो पर्नु ठूलो कुरा होइन। तर, यहाँ सानातिना कुरालाई लिएर फोहोर राजनीति गर्न खोजियो। केही नेताहरू पार्टीकै छवि बिगार्ने किसिमले लागि परेका छन्। तिनीहरूलाई कारबाही गर्न पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग आग्रह गर्दछु।
यस्तो बेला सहयोग गर्नुपर्नेमा पार्टीकै केही नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा मेराविरुस्द्ध भ्रम छर्न सक्रिय छन्। ती भ्रमकापछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु। पार्टी फुटाउनेले तीन वर्षदेखि मेराविरुद्ध पनि विभिन्न प्रोपोकाण्डा रचेका छन्।
अहिले कसरी काम गरिरहनु भएको छ?
देशमा कोरोनाको जोखिम बढेसँगै अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छौं। महानगरले आफ्नो क्षेमताले भ्याउनेभन्दा बढी काम गरिहरेको छ। कसैलाई कुनै समस्या प-यो भने वीरगञ्जको हेल्प लाइन नम्बरमा फोन गर्नुस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौं।
हामीले लासको राजनीति नगरौं भनेर पटक–पटकभन्दा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यसको बारेमा जनताले कुनै दिन जवाफ दिने नै छन्। सरकारले व्यवस्था पनि गर्न सकेन र हामीलाई विकल्प पनि दिन सकेन।
वीरगञ्जको तत्कालको समस्या के हो जस्तो लाग्छ?
वीरगञ्जमा दुईवटा कुराको आवश्यकता छ। एउटा कोरोना अस्पताल र अर्को छिटोभन्दा छिटो परीक्षणको दायरा बढाउने। हामीले अहिले यही कुरामा आवाज उठाइरहेका छौं। कोरोना अस्पालको लागि हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग माग ग¥यौं। तर, त्यो कोरोना अस्पतालको विषयलाई लिएर यति धेरै राजनीति भयो कि अहिले त माग गर्न पनि लाज लाग्ने अवस्था भएको छ।
गण्डकी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउनका लागि अस्पतालसँग सम्झौता भएर बैशाख ८ गते सरकारसँग स्वीकृतिका लागि पठाएको पत्रको अहिलसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। तर, बाहिर फेरी यसै अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने हल्ला सुनिन्छ। त्यहाँ पनि दोहोरो राजनीति घुसिसकेको छ। तर, म जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि पछि हट्ने छैन।
हामीले लासको राजनीति नगरौं भनेर पटक–पटकभन्दा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यसको बारेमा जनताले कुनै दिन जवाफ दिने नै छन्। सरकारले व्यवस्था पनि गर्न सकेन र हामीलाई विकल्प पनि दिन सकेन। संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा वीरगञ्जमा सोचे जस्तो काम हनु सकिरहेको छैन।
अहिले जतिसुकै फोहोरी खेल खेले पनि भोली सबै कुरा छर्लङ्ग हुने छ। म आफ्नो यात्रा र उद्देश्यबाट कहिले बिचलीत हुने छैन। यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि महानगरका कर्मचारीले गरेको काम भने निकै सह्रानीय छ। कोरोनासँग लड्न सबैको सहयोग आवश्यक छ। त्यसले सरकारका सबै निर्देशन हामीले पालना गर्नुपर्छ।